संक्रमितसँगै क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई परीक्षणबिनै घर पठाइयो ! «
संक्रमितसँगै क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई परीक्षणबिनै घर पठाइयो !
Published : 15 April, 2020 7:31 pm
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण देखिएका इशनाथ नगरपालिका–५, मोतीपुरका १९ वर्षीय युवकसँगै क्वारेन्टाइनमा बसेका ११ जनालाई परीक्षण नै नगरी घर पठाएको पाइएको छ । चैत १६ गते भारतको नयाँ दिल्लीबाट आएर जनता माध्यमिक विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका युवकमा कोरोना संक्रमण भएको सोमबार पुष्टि भएको थियो । उनको सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी गरी परीक्षण गर्न जनकपुरको ल्याबबाट प्रादेशिक टोली रौतहट आइपुगेको छ ।